Milestone-Iqela laseNantong Guosheng Intelligence Technology
IZiko le-①GMF4027LX iziko le-axis ye-axis emihlanu yathunyelwa eJamani, kwaye kuye kwavela itekhnoloji entsha ye-axis emihlanu. Vuselela i-Robot ye-Chelsea Robot automation (Nantong) Co, Ltd, ukuzonwabisa kwizixhobo ezenzekelayo, umtya wemveliso ye-CNC.
Ukulungiselela ukwabiwa kwezabelo kunye nokudweliswa koluntu, kwathiwa igama kwakhona yiNantong Guosheng Intelligence Technology Group Co, Ltd. Ukumisela i-Investa (Jiangsu) Izixhobo zoMatshini Co, Ltd. I-CMC lathe yongezwa kumgca wemveliso.
Yaziswa ngetekhnoloji evela eTaiwan, setha iJiangsu Dawei Precision Technology Co, Ltd., kunye nomatshini othe tyaba wokuguba wokugaya wongezwa kumgca wemveliso. Okwesihlandlo sokuqala, yanikezelwa elinye lamashishini "aphezulu angama-30 oMshini wesiXhobo saseTshini saseTshayina".
Ibhendi yokuqala yeevenkile ezi-4S zeGuosheng Group zamiselwa.
Uluhlu lweyunithi elilawulayo yeChinese Tool Machine Tool Association Association, lingene kwinqanaba lokuphuhliswa ngokubanzi malunga nokuthengisa okuzimeleyo kwezixhobo zomatshini weCNC njengeshishini eliphambili.
I-Nantong Guosheng Precision Metalmaking Co, Ltd yathunyelwa eTongzhou, yaze yabizwa ngokuba yiNantong Guosheng Precision Machchan Co, Ltd.
Ungene kwicandelo lokuveliswa koomatshini bokuchwephesha oomatshini, kwaye waqonda ukukhula kwangaphambili kweshishini lesixhobo seCNC.
Ngokusekwe kulwandiso lwecandelo lezemveliso, setha iNantong Guosheng Foundry Co, Ltd., ukuvelisa ii-castings ngokuzimela. (Ngo-2018, uGuosheng Foundry waphinda wabizwa ngokuba nguNantong Guosheng Machine Companies Co, Ltd.)
Isixhobo sokuqala somatshini sika-Guosheng se-GuM savela kwi-Shanghai International Machine Tool Exhibition.
Umzimveliso wokwenza izixhobo ze-Guosheng Precision wasungulwa ukuba ubandakanyeke kwicandelo lezoshishino lokuchwechwa kweshiti yesinyithi kwaye wenza ukuba uGuosheng alandele imfezeko kunye nobuchule bokugqibela.